Onyinye Ahịa | Uhie okpu JBoss EAP bụ onye ikpeazụ maka Best Cloud Middleware
Aha n 'udiri aha Red Hat JBoss EAP bu onye nchikota maka Best Cloud Middleware nke 2016-2017
Enwere m obi ụtọ ikwusa ozi ọma ahụ Uhie okpu JBoss Enterprise Application Platform bụ onye ikpeazụ na 2017 Cloud Awards, na-alụ ọgụ maka aha "Best Platform-as-a-Service / Cloud Middleware." A na-ele anyị anya ime ya nke a na usoro mkpebi ma na-atụ anya nkwupụta nke izugbe n'ozuzu na ọ bụghị nke dị anya n'ọdịnihu.
N'icheta ihe anyị mezuru n'etiti afọ gara aga, ọ na-eju m anya na ebe anyị bịara. Naanị ọnwa isii azụ, anyị mere ka otu n'ime usoro anyị kachasị mma ma bụrụ nke a na-achọkarị na mbubata nke JBoss EAP 7 dị ka ntọala nke usoro igwe ojii. Taa, JBoss EAP bụ isi iyi isi iyi Java EE 7-ngwa ngwa ngwa. Anyị gara n'ihu ikpo okwu maka ọnọdụ ígwé ojii - karịsịa Red Hat OpenShift Container Platform, nke ya onwe ya bụ onye mmeri 2013 Cloud Awards - inye ndị na-emepụta mmemme Java ọnụ ụzọ mbata ka ígwé ojii-edebanye aha obodo, microservices architectures, compartments, na nke ahụ bụ naanị ọnụ nke iceberg, ka ha na-enye ha ike iji nọgide na-eji ma na-emewanyewanye atụmatụ ha na-enyocha ngwa ngwa.
Dịka ọhụụ TechValidate si ele Hat Hat na 2016 anya, nsogbu kachasị elu nke na-eche ọtụtụ nhazi IT n'oge a gụnyere ụgwọ na ịkwanye iji mee ka ntọala ngwa ngwa, na ịdị arọ iji mee ka ngwa ngwa na-ere ahịa na onye na-emepụta ihe. Iji zute nsogbu ndị a, ndị mmekọ na-ahazi ikike ha ịkwalite ịkwalite ahịa na ọganihu iji kpọsaa ngwa ngwa karịa mmegide ha site n'ịgbalite mmezi ma na-akpali ngwa ngwa na ígwé ojii - ọtụtụ ndị na-agagharị na JBoss EAP iji nọgide na-arụ ọrụ ndị a.
Onye nyocha oru nke IDC na-ekwu okwu na Red Hat ahịa tinye n'ọrụ JBoss EAP iji mee ka ha nwekwuo mmelite ngwa ngwa. Ndị ahịa ahụ jara JBoss EAP mma maka inye usoro ntụrụndụ ego nke na-eme ka njikọ ha na-arụ ọrụ ma na-enye nkwanye ùgwù na ego na-akwụ ụgwọ maka ihe mgbakwunye, ndokwa ndị ọzọ. 2015 IDC na-atụle, nke okpu okpu okpu, choputara na mmekorita ndia mezuru uru 509 percent di ihe kariri afo ato, ka ha na-eme 70 pasent ihe kariri kwa afo na 35.5 percent karia oge onu ogugu n'eji ngwa di iche iche na JBoss EAP.
Ọnụ ọgụgụ ahụ dị iche iche, ma kwuo okwu dị mma nke JBoss EAP nwere ike inwe na òtù ndị ahịa. Ihe dị ka ndị a, na ụzọ 100 pasent nke ndị na - anabata TechValidate nyochare kwuru na ha nwere obi ụtọ na JBoss EAP, nyere aka ịgba akaebe anyị mere - na ọrụ anyị na - eme iji mee ka ịga n'ihu - na JBoss EAP. Enwere m obi ụtọ na ọrụ dị uchu anyị tinyela na nke a, ọzọkwa, a na-ewere anyị na a ga-aghọta ya.
Ụfọdụ n'ime uhie uhie kachasị mkpa JBoss Enterprise Training & Certification Course dị ka ndị na-eso:
Redhat JBoss na-agbaso ngwa ngwa
RedHat JBoss Enterprise Development Development I
RedHat JBoss Grid Development
Redhat JBoss nchịkwa nchịkwa II
Redhat JBoss nchịkwa nchịkwa m
Okpu uhie IT Single Sign On (SSO) Na-agba ọsọ na Uhie okpu